Uwafumana njani amabala engca ngaphandle kwezihlangu - Malunga Izihlangu
Ishishini Impahla Yamadoda
Uwafumana njani amabala engca ngaphandle kwezihlangu
Ukuhlamba amabala engca kwimpahla yinkqubo ethe tye, kodwa xa izihlangu zakho zigutyungelwe ngengca, zinokukhohlisa kancinci. Ngethamsanqa, amabala engca kwizihlangu anokuyoyiswa ngokusebenzisa enye okanye zonke ezi ndlela.
Isisombululo sebrashi yamazinyo-Iviniga
Esi sisisombululo esilula esisebenzisa izinto osenokuba sele unazo njengeviniga kunye nebrashi yamazinyo endala.
Beka ibhakethi phantsi elinokukwazi ukuhambisa amanzi amancinci, mhlawumbi ngaphandle okanye kwigaraji.
Kwikomityi nganye yeviniga uyongeza kwibhakethi, yongeza iikomityi ezimbini zamanzi ashushu.
Enye into phakathi kokukhuhla ibala ngebrashi yamazinyo endala (okanye entsha ithengelwe le njongo) kwaye uyisule ngendwangu yokuhlamba, usebenzisa umxube weviniga njengoko kufuneka.
I-Obliterate Grass Stains eneendlela ezi-5 ezilula
Uyicoca njani iGrass Artificial for a Best Iziphumo
Ungasusa njani iStain eQinisekileyo kwiVinyl Flooring
Umatshini wokuhlamba iimpahla
Ukuba awufuni ukusebenzisa iviniga, isepha yokuhlamba impahla ene-bleach ekhuselekileyo ngombala lukhetho olufanelekileyo, njengeengcali zezihlangu ngaphezulu Izihlangu ezingaziwayo qinisekisa.
Okokuqala, funda imiyalelo kwizihlangu zakho ukuze uqiniseke ukuba ayinazo izilumkiso ezithile malunga nokusebenzisa isepha. (Ukuba iyenzeka, ayisiyonto ilungileyo leyo kuwe.)
Khangela i-detergent equle zombini i-bleach kunye ne-enzyme. Oku kulungele ukulwa neengca zengca.
Beka i-detergent encinci ngokuthe ngqo kwibala, uze uyihlikihle ngoxinzelelo oluncinci. Ukuba usebenzisa i-powder detergent, xuba kunye namanzi amancinci ukuze wenze unamathisele.
Yiyeke ibala kwimizuzu eli-10 ukuya kweli-15.
Phinda njengoko kufuneka.
Ungasebenzisa kwakhona isepha yokuhlamba izitya kwindawo yokuhlamba izitya ngokulandela amanyathelo afanayo angentla.
Ungasebenzisa i-baking soda ngokufanayo nendlela oyisebenzisa ngayo i-powder yokuhlamba impahla:
Hlanganisa isoda yokubhaka kunye nenani elincinci lamanzi ngaphambi kokuyifaka.
Beka omnye umxube ngqo kwibala, emva koko uwugudle ngoxinzelelo oluncinci.
Umdibaniso wazo zonke ezi zinto zingasentla
Ukuba ibala linenkani, ungaqhuba kuzo zonke iindlela ezingentla. Ukuba neentlobo ngeentlobo zeemveliso zesepha kunye neendlela ezinokuthi ekugqibeleni zinqobe ibala.
Ezinye izinto zezihlangu
Ukuba awuzange ube nethamsanqa ngokwaneleyo lokufumana amabala engca kwizihlangu kunye nezinye izinto ezinje ngesikhumba okanye i-suede, konke akuphelanga. Kukho iindlela zokucoca ezi zinto zezihlangu.
I-Suede ifuna inkathalo yothando. Ngaphambi kokuba ubhenele kwizisombululo ezimanzi, zama izisombululo ezimbalwa ezomileyo kuqala:
Khulula amabala usebenzisa ipensile yokucima okanye ubuchule bentsimbi. Unokusebenzisa into eqinileyo, ecekeceke yesonka esidala.
Fumana ibrashi ye-suede kunye ne-scrub eshukumayo ekhawulezayo, uhlala uxukuxa kwicala leentsinga, hayi ngokuchasene nabo. Oku kuya kulahla ngakumbi ibala.
Emva koko, sebenzisa izisombululo zokucoca ezimanzi ukugqiba ukususwa kwebala. Ungasebenzisa esinye sezisombululo ezichazwe apha ngasentla kodwa ngenxalenye encinci (nje dab) yesisombululo sokucoca njengoko usisebenzisa ngobunono. Endaweni yeviniga, unokuzama ukukhuhla utywala nge-swab yomqhaphu.
Phinda onke amanyathelo njengoko kufuneka, emva koko wome umoya.
Phawula Xa usebenza nolwelo, ungaze uthele ulwelo ngokuthe ngqo kwibala. Thatha amathontsi amancinci, kwaye uwasebenzise ngononophelo. Unokwenza oku usebenzisa i-dropper ukuvuza ithontsi elinye ngexesha, okanye ungasebenzisa i-swab yomqhaphu.
Qalisa iindlela ezifanayo, ezomileyo zokukhulula kunye nokuxubha. Emva koko sebenzisa i-non-gel, intlama yamazinyo emhlophe. Hlikihla intwana encinci ngobunono kwibala ngebrashi yamazinyo okanye ilaphu, emva koko usule ngesiponji esincinci.
Ukuba ayisebenzi, ungaqhubela kwizisombululo ezifanayo ezimanzi ezichazwe apha ngasentla.
Kukho indlela eyahlukileyo yesikhumba enokuthi isebenze: fumana imolasses kwaye uyisasaze ngapha nangapha kwebala, emva koko ubrashe ngobunono kuyo. Shiya izihlangu zakho ubusuku bonke ukuze ungene kwimolasses. Ngomso olandelayo, uhlambe ngobunono ngamanzi. Sukusebenzisa isepha yolwelo yokuhlamba izitya okanye ezinye iisepha ezinealkaline. I-alkaline iyanxibelelana neetannins zesikhumba kwaye ibangele ukuba zibekwe.
Yiba nezixhobo (kwaye ube nomonde)
Ingcebiso yokugqibela kwimfuno yakho yokucoca izihlangu: qaphela. Ezi ndlela zingasentla ziziphakamiso nezikhokelo. Sebenzisa okukujikelezileyo. Awunayo ibrashi yamazinyo okanye ibhakethi? Ewe, mhlawumbi unesitya esikhulu esivela ekhitshini lakho kunye nebrashi yokucoca evela kwizinto ezahlukeneyo eziphantsi kwesinki sakho. Yiba nomonde kwaye uthantamise. Ukukhawulezisa umsebenzi okanye ukungakhathali kakhulu akuyi kusebenza, kwaye kungonakalisa izihlangu zakho.
Ukuncancisa Kwi-Intanethi Mmovie Ukuzalelwa Kwaye Ukuzalwanolawulo Autism Kanye Bantwana I-Inshorensi Yempilo
iimpawu zomhlaza wesisu kwinja
Ukutyumka kukuwa njengoko kunjalo
Umjikelo wobomi beempendulo kwiphepha leenkwenkwezi
izinto ezizodwa zokwenza isoka lakho
ndingayifumana phi itattoo nge15